ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၄ ဦးသေဆုံး - Yangon Media Group
ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်တွင် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် လူ ၄ ဦးသေဆုံး
လော့စ်အင်ဂျလိစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိ ကျောင်းတစ်ခုအပါအဝင် နေရာအတော်များများတွင် အင်္ဂါနေ့က သေနတ် သမားတစ်ဦး ၏ တွေ့မရှောင် ပစ် ခတ်မှုကြောင့် လူ ၄ ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး ကလေးငယ်အများအပြားအပါ အဝင် လူတစ်ဒါဇင်နီးပါးခန့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
တဲဟာမာဒေသလက်ထောက်ရဲမှူးကြီး ဖီလ် ဂျွန်စတန်က Rancho Tehama Reserve အိမ်တစ်အိမ်တစ်ခုတွင် ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၈ နာရီတွင် စတင်ခဲ့ပြီး မူလတန်းကျောင်းတစ်ခုအပါအ​၀င် ယင်းဒေသ ရှိ နေရာတော်တော်များများတွင် ဆက်လက်ဖြစ်ပွား ခဲ့ပြီးနောက် ယင်းသေနတ် သမားကို ရဲတပ်ဖွဲ့ အသေပစ်ခတ် ခဲ့ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့သည်။
သို့သော် သေဆုံးသူများထဲတွင် ကလေးငယ်များမပါဝင်ကြောင်း ၄င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ လက်ထောက်ရဲမှူးကြီး ဂျွန်စတန်က “ပစ်ခတ်သူဟာ ပစ်မှတ်တွေကို ကြုံရာကျပန်းအနေအထားပစ် ပစ်ခတ်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ထင်ရှားပါတယ်” ဟု သတင်းစာရှင်းလင်း ပွဲတစ်ခုတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းကျောင်းတွင် ကလေးငယ်တစ်ဦး မှာ သေနတ်ပစ်ခံခဲ့ရပြီး ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
၏မိခင်နှင့်အတူ ကားစီးနေသည့် အခြားကလေးငယ်တစ်ဦးမှာ အသက် အန္တရာယ်မစိုးရိမ်ရသည့် ဒဏ်ရာများ ရရှိခဲ့ကြောင်း ဆိုသည်။ အမည်ဖော်ပြ ထားခြင်းမရှိသည့် သေနတ်သမားသည် နေရာတစ်ခုတွင် တိုက်မိခဲ့သော ကားတစ်စီးကို ခိုးယူခဲ့ပြီးနောက် ပစ်ခတ်မှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းနောက် ဒုတိယကားကို ခိုးယူခဲ့ပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် ပစ်ခတ်မှု အတွက် သေဆုံး ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ဇင်ဘာဘွေစစ်သားများက နိုင်ငံပိုင် ရုပ်သံဌာနကို သိမ်းပိုက်၊ အာဏာသိမ်းလိုက်ကြောင်း ပြောဆိုမ?
ခရိုင်းမီးယား ကျွန်းဆွယ်ကို ရုရှားသိမ်းပိုက်ခြင်း ငါးနှစ်ပြည့် အခမ်းအနား ကျင်းပ
သိန်းသန်းဝင်းနှင့် သက်နိုင်ကို နှစ်နှစ် သက်တမ်းတိုးခဲ့ပြီး ချင်းကွင်းလယ် ကစားသမားဟောင်း ဘ
စင်ကာပူ ချန်ဂီလေဆိပ်ကို ဇန်နဝါရီလတွင် ခရီးသည် ၅ ဒသမ ၃ သန်း ဖြတ်သန်းသွားခဲ့
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် သောင်ရင်းမြစ် မြန်မာဘက်ခြမ်းတွင် ထိုင်းဘက်မှ သဲနှင့်ခဲများ လာရောက်စုပ
တန်ကြေးအမြင့်ဆုံး နောက်ခံလူများတွင် လူးကပ်စ်ဟာနန်ဒက်စ် ပါဝင်လာ ၊ စိန်ခေါ်မှုအသစ် ရှာဖွေရန် ??